Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogadenia ee Australia Gobolka Victoriya oo Maanta Munasabadii Ciida Hal meel kuwada ciiday
Jaaliyada Ogadenia ee Australia Gobolka Victoriya oo Maanta Munasabadii Ciida Hal meel kuwada ciiday
Posted by ONA Admin	/ September 24, 2015
Jaaliyada Soomaalida Ogaadeeniya ee Wadankaas Australia Gobolkiisa Victoriya ayaa Munaasabada Ciidul Adxa maanta isugu timid Xaflad si heer sare ah loo soo Agaasimay. Halkaas oo dhamaan xubnaha jaaliyada iyo caruurtaba la keenay. Waxaa xafladaas lagu qabtay Yarraville Park oo ah goobta loogu talagalay dadweeynaha dagan gobalka Victoria in ey ku qabsadaan xafladaha looyaqaan (BBQ).
Masuuliyiinta Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee Victoria ayaa soodhaweeyey dhamaan bulshada ka soo qeyb gashay xafladaas, una faray hambalyo cideed shacab waynaha Soomaalida reer Ogadenia iyo dhamaan umada muslimiinta meel kasta oo ay joogaanba.
Maalintan ayaa fursad u aheyd dhamaan bulshada kasoqeybgashay munaasabadan farxadeed ee ciida. Waxaa kaloo fursad u aheyd dhamaan hooyooyinka iyo aabayaasha oo fursad u helay ilmahooda inay helaan goob ay faraxada ciida ku qaataan iyada oo dhamaan goobta laysugu caruurta jaaliyad waynta soomaalida Ogaadeeniya ee Victoria. Halkaas ooy damaashaad iyo farxad balaadhan ku wada qaateen
Ururka OYSU Melbourne ayaa gacanweyn ka geeystay xafladaan fududaynteeda iyo u Adeegida dad waynihii munaasbada isugu yimid.
Gabagabadii xafladan ayaa ku dhamaatay si farxaad ah.
Waxaan Alle ka baryeynaa in ciidan ciideeda kale aan ku gaadhno Nabad,Barwaaqo iyo Ogadenia oo xorowda dhamaan teena ku ciidno dhulkeenii Hooyo.